कसले बाध्य पार्यो ‘आत्महत्या’ गर्ने ‘ब्लु ह्वेल’ खेल्न
HOME » कसले बाध्य पार्यो ‘आत्महत्या’ गर्ने ‘ब्लु ह्वेल’ खेल्न
डिसी नेपाल , १८ श्रावण २०७४
बीबीसी। मुम्बईमा १४ वर्षका एक बच्चाको आत्महत्यापछि कथित अनलाइन गेम ‘ब्लु ह्वेल च्यालेन्ज’ लाई लिएर ठूलो विवाद सुरु भएको छ।
भारतमा यो गेम भर्खरमात्रै चर्चामा आएको हो। तर रुसदेखि अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, कम्बोडिया, चीन, जर्जिया, इटली, केन्या, पराग्वे, पोर्चुगल, साउदी अबर, स्पेन, अमेरिका, उरग्वेलगायत देशमा कम उमेरका कयौं बच्चाले ‘ब्लु ह्वेल च्यालेन्ज’ कारण आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। कुनै अनलाइन गेम कसैको दिमाग कसरी कब्जा जमाउन सक्छ, जसका कारण बच्चा आफ्ना हत्या गर्न बाध्य हुन्छ?
यो गेमको पछाडि को छ ?
यो गेमको पछाडि एकभन्दा धेरै मानिस छन्। तर अहिले जो पक्राउ परेका छन्, उनको नाम फिलिप बुदेकिन हो। २१ वर्षीय फिलिप रुसका बासिन्दा हुन्। रुसबाट नै यो ज्यानमारा खेलको सुरुवात भएको थियो। गेमको एडमिनमध्ये फिलिपलाई यही वर्षको मे महिनामा युवाहरुलाई आत्महत्याकालागि उक्साएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।
बीबीसीका अनुसार फिलिपले पहिला आफूलाई निर्दोष भएको बताएका थिए। उनले आफ्नो कुनै खराब उद्देश्य नभएको र आफूले केवल आनन्द लिइरहेको बताएका थिए।
रुसको पत्रिका नोवाया ग्याजेटाका अनुसार फिलिप जस्तै एडमिन गेममा भाग लिनेमध्यलाई उनको सामाजिक संजालको एकाउन्टबाट आफ्नो प्रमाण मेटाउन आग्रह गरेका थिए। छानविन अधिकारी एन्टन ब्रीडोका अनुसार उनलाई त्यस्ता युवाले प्रमाण दिएका थिए, जो गेमको अन्तिम चरणमा थिए, तर उनले आफ्नो ज्यान फालेनन्।
‘फिपिललाई आफूले चाहेको नतिजा निकाल्ने तरिका थाहा थियो,’ ब्रीडोले भने, ‘ उसले २०१३ मा काम सुरु गरेको थियो तर उसले आफ्नो गल्ती सुधारेको थियो। फिलिप र उसका साथीहरुले सबैभन्दा पहिला विके (सोशल नेटकर्व) ग्रुपमा बच्चालाई डरलाग्दा भिडियोप्रति आकर्षित गरे।’
ब्रीडोका अनुसार उहीहरु धेरै जसो बच्चाहरुलाई आफ्नो जालमा फसाउँथे, जसको मनोविज्ञानमाथि सजिलै खेलवाड गर्न सकिओस्।
यद्यपी यो गेमको पछाडि फिलिपमात्रै नभएर अन्य मानिसहरु पनि संलग्न छन् र उनीहरुको खोजी कार्य भइरहेको छ।
के हो ब्लु ह्वेल च्यालेन्ज ?
मोबाइल, ल्यापटप वा डेस्कटपमा खेलिने यो गेममा प्रतियोगीले ५० दिनमा ५० छुट्टछुट्टै टास्क पूरा गर्नुपर्छ। प्रत्येक एक टास्कपछि आफ्नो हाथमा एक निसान बनाउनुपर्छ। यो गेमको अन्तिम टास्क आत्महत्या हुन्छ। बेलायतको प्रहरीले पनि स्थानीयलाई चेतावनी दिँदै कम उमेरका किशोर किशोरी वा बच्चालाई यो गेम खेल्न नदिन भनेको थियो। बीबीसीका अनुसार एक गुमनाम ‘टास्क मास्टर’ गेम खेलिरहेका मानिसलाई कहिले भुतको फिल्म हेर्न त कहिले आफैंलाई पीडा दिन आदेश दिन्छ।
के कुनै मोबाइल गेम कसैलाई आत्महत्या गर्न उक्साउन सक्छ? औरंगाबादका मनोचिकित्सक मधुरा अन्वीकर भन्छिन्, ‘ मोबाइल गेम खेल्ने बेलामा किनै आनन्द आउँछ। यसले दिमागको केही भागमा यस अनुभवलाई लिएर बारम्बार महसुर गर्ने इच्छा पैदा हुन्छ।’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो गेममा जुन टास्क दिइन्छ, त्यसले गेम खेल्नेको उत्सुकता बढाउनुका साथै म गरेर देखाउँछु भन्ने भावना पैदा हुन्छ, तर त्यसको नतिजाका विषयमा केही जानकारी हुँदैन।’
बेंगलुरुको सेन्टर फर इन्टरनेट एण्ड सोसाइटीका विशेषज्ञ उद्भव तिवारी भन्छन्, ‘यो त्यस्तो गेम होइन जसलाई मोबाइललगायतका चीनमा डाउनलोड गरेर खेल्न सकिओस्। यो च्यालेन्जमा इन्टरनेटको भूमिका निकै फरक छ। यहाँ समूहका कुनै पनि सदस्यद्वारा च्यालेन्ज दिइन्छ। र खेल्नेले यो च्यालेन्जलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लिनसक्छ। च्यालेन्ज कुनै पनि प्लेटफर्ममा दिइन्छ।’ ब्लु ह्वेल जस्ता सेल्फ–हार्म गेम्ससँग जुध्नकालागि सोशल नेटवर्किङ साइट्सले पहिलदेखि नै कदम उठाएको छ।
फेसबुक र इंस्टाग्राममा ब्लु ह्वेल सर्च गर्दा तपाइँसँग सोधिन्छ, के तपाइँ कुनै समस्याबाट गुज्रिरहनु भएको छ? हामी तपाइँलाई सहयोग गर्न सक्छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे निजी सचिवालयमा ब्यापक कटौती